Google Adwords Isixhobo sokuCwangcisa | UMcwangcisi wegama elingundoqo
Iitoni abantu benza ukhangelo Google ngoku
Ngaba ukufumana wena?
Fumana amagama ekunene
Qala ukuchwetheza ukufumana amagama kakuhle. Thola trends ezintsha:
Hluza iziphumo zakho.
Fumana amathuba ogqibeleleyo.
ezinamandla izixhobo zethu ukuhluza kunye nesicwangciso likuvumela ukuba ungaziva kwaye babone amathuba elingundoqo okunene ukuba nomdla. akuyi kufuneka nasiphi na isixhobo ukuba enze uphando olupheleleyo elingundoqo With zonke-in-nye Lwegama Planner zethu.
Yenza uluhlu igama kwaye ufumane last drop kuphuma amandla abo.
Gcina kwaye ubeke amagama akho aphambili kuluhlu ukuze ulawule nangaliphi na ixesha Clever Ads zeClever Planner. Uyakwazi ukwenza izintlu ezintsha ukusuka ekuqaleni, uhlaziye, kwaye uzidibanise okanye ugqithise amagama aphambili kuluhlu olunye uye kolunye.
Khangela ukuba amagama ekunene ukuze ishishini lakho
Discover amawakawaka amagama amatsha ukufumana iziphumo ezichanekileyo Internet ukuze ugxininise kuphela amagama ukuba ngokwenene umdla kuwe. Wena olawula.
Yenza uluhlu omtsha okanye ugcwalise uluhlu zakho ezikhoyo
Wakuba ukhethe amagama bakho, uya kukwazi ukwenza uluhlu esitsha okanye uziquke ekhona. Lawula uze udlale nabo njengoko ufuna - alibale Excel.
Ngenisa amagama akho aphambili ngqo kwimikhankaso yakho Google Ads
Layisha ngokulula amagama aphambili kuluhlu lwakho ukuya kumaphulo akho Google Ads ngonqakrazo olunye. Khangela amagama aphambili owaphosayo kwimikhankaso yakho ngokukhangela kwaye ukhulise ukusebenza kwakho.
Thola amagama amatsha naphi na
Clever Ads seNtloko seNtengiso senzelwe ngokukodwa ukuhambisa amandla aphezulu nakwesiphi na isixhobo. Ungayisebenzisa nanini na kwaye naphi na.
okhuphisana Beat ne Chrome yethu Extension
sites nowethu Khangela kwaye bafumanisa ukuba sesiphi amagama banceda kuzo kutsala izithuthi.
Umxokozelo Chrome Extension
“Ndithande efana Chrome ukuba ziphuhliswe, ngale ndlela ke bangahlaziya websites ezifanayo kwaye ufumane izimvo ezivela amagama abayisebenzisayo. Kwakhona enjoy ukuba ulande yonke ingcaciso enxulumene amagama for free ukuze ndikwazi ukwenza izigqibo ezingcono kunye ngaphezulu baziswe.”.
“Le amagama Ndifumana ukusuka Google Lwegama Planner idla generic kakhulu kwaye ezichazayo kakhulu ... yiloo nto ndikhetha Clever Ads Lwegama Tool Research. Indinika iziphumo ezigqibeleleyo njengoko zifumana idatha kwimithombo eliqela, kwaye andifuni ukuba Google Ads okanye ndibhalise naphi na.”
“Ngokukhawuleza nje ukuba ndibandakanye iqela Clever Ads endiwafumeneyo ngesixhobo segama leNtengiso seClever, ndibone ukwanda kwi-CTR yeeNtengiso zam Google Ads . Ngoku ukuba ndibize amagama aphambili abaphulaphuli bam bekhangela, ndiyekile ukuchitha imali ekutsaleni ukugcwala komgangatho osezantsi.”
Iitoni abantu bafuna iinkonzo kunye neemveliso ku Google. Kutyhila i amagama oyisebenzisayo.
Okungakumbi malunga Clever Ads esiKhulu sesiXhobo seNtengiso
Makhe revolution zonke-in-nye isixhobo uphando elingundoqo ukuba kwabezentengiso abathengisi. Ukukhulisa icebo lakho SEO ngoku!
Iimpawu kunye neenzuzo yemfihlo Planner yethu
Ngesi sixhobo se-SEO, uya kutsala abantu abanomdla wokwenyani kwishishini lakho (imveliso okanye iinkonzo) ngokukhomba amagama aphambili ekunokuthi abathengi bakho babachwetheze kwibar yokukhangela kuGoogle. IsiCwangcisi Clever Ads seClever siyilelwe ukulugqwesa ukhuphiswano ngokuvelisa amagama angundoqo omsila ixesha elide iimfuno zeshishini lakho kwimikhankaso Google Ads Isicwangciso esihle se-SEO kubalulekile ukuba indawo yakho iqhube kakuhle, kwaye i-SEO ayinanto ngaphandle kophando lwamagama aphambili. Masikuncede!
Fumana iziphumo ezichanekileyo & siyingenelo ishishini lakho
igama sixhobo sethu isizukulwana ezamahala uya kukubonisa onke amagama ezifanelekileyo ezinxulumene uphendlo lwakho kwaye ukuvumela ukuba ukuyicoca nabo metric zentengiso Google isitshixo. Uya ukufumana iziphumo ezichanekileyo ukwenza izigqibo benolwazi kwaye khetha amagama aqhuba kakuhle kakhulu imikhankaso yakho. Ukwenza izigqibo okuthengisa kwishishini ngaphandle kokuba kakuhle unolwazi nokuba iziphumo ekunene kunokukhokelela ukusebenza okungekuhlanga kunye, ngenxa yoko, asifikeleli iinjongo zethu ngexesha elifunekayo. Inoluhlu elingundoqo le kumhleli wethu elingundoqo akuyi kuba le ngxaki kwaye free ngokupheleleyo!
Khohlwa malunga ne-Excel kunye neeheet ads spre ezinzima
Siyazi ukuba ukuphatha kunye nokuhlalutya idatha kumaxwebhu amakhulu kunokukushiya udiniwe kwaye unxunguphele, kunye nokufuna ixesha elininzi kunye nezixhobo otyale imali kuyo, unike iziphumo ezibi. Sukuba nexhala, silapha ukukunceda! Amaxesha apho bekufuneka ukhuphele iitoni zamagama aphambili kwi-spre heet ads spre kwaye usebenze kuyo kangangeeyure zokucoca ulungelelanise ziphelile. Ukwenza uphando lwegama elingumgangatho osemgangathweni ngoku kulula ukubulela Clever Ads kwegama eliphambili leNtengiso. Hlela uluhlu lwamagama aphambili, udibanise, uwahlule okanye uwagqibezele ngokuthe ngqo kwisixhobo sethu. Simahla. Akukho shicilelo lincinci. Sukuba nexhala, silapha ukukunceda!
SEO KUNYE ZORHWEBO BEST IZENZO
Qalisa kunye noncedo abantu banifumana
Ukwandisa imikhankaso yakho PPC (pay--unqakrazo nganye) luze lukhulise ROI yakho (Return Of Investment) kunye neentengiso ngokuthi kujoliswe la amagama afanelekileyo customers zakho ufuna phezulu nokuba sele ukusebenza kakuhle ngenxa oosomashishini okhuphisana nabo. Musa ndiphoswe ithuba elinye xa usenza uphando lwakho elingundoqo.
Clever Ads sikwabonelela ngolwazi olungakhethi cala ngokufumana amagama aphambili kwimithombo yedatha eliqela, hayi kuGoogle kuphela. Idatha yoMcwangcisi wegama eliphambili kuGoogle ihlala ityibilika, kwaye siqulunqe isixhobo sethu samagama aphambili ukuze wenze uphando olungcono lwegama kunye nokwenza izigqibo ezikrelekrele kwizicwangciso zakho zokufumana ezihlawulelweyo.
Qala iintengiso khona kude
Ngezixhobo Clever Ads Keyword Planner awunakuphatha kuphela amagama akho aphambili kunye noluhlu lwamagama aphambili kwindawo enye ukwenza kube lula kwaye kube lula! Google Ads kwimikhankaso yakho yeNtengiso zikaGoogle kunye namaqela entengiso ngqo Clever Ads zonke zindawo enye! Ixesha yimali kwaye sifuna ukuba ugcine zombini ngokusebenzisa isixhobo esingundoqo segama elisikiweyo.
Kufuneka-wenze noun elingundoqo
Khumbula ukuba SEO best practice tip ukuba ngamaxesha ukukhangela ukusebenza amagama zakho ukuqhelana zazivelela babo, amagama stop ukuba eziqhuba kakubi kuba nomdla ishishini lakho, uze ukuvavanya amagama amatsha ukuba sandise ukusebenza iphulo lakho. Soloko ugcine amehlo kokwenzeka elingundoqo! uvavanyo beenkcubeko ngundoqo kwaye siza qiniseka ukuba bakhumbuze ukuba uhlaziye amagama zakho ukuze uphephe ukuchitha imali ngokungeyomfuneko kwi amagama eziqhuba kakubi. Nge kumhleli wethu elingundoqo ungaphoswa into.
Wamkelekile ikamva uphando elingundoqo kunye SEO ngqo
Amava ethu ekudaleni nasekusebenziseni Google Ads zeenkampani ezingaphezu kwe-150,000 zisinceda sazi ukuba yeyiphi eyona nto ibalulekileyo kuwe xa ukhetha amagama aphambili kwishishini lakho. Siyayazi into oyifunayo! Clever Ads Keyword Planner, uphando lwamagama aphambili luya kukhawuleza kwaye lube lula, kwaye ungasoloko ubuya uze kuhlaziya kwaye ulawule uluhlu lwamagama aphambili. I-SEO yakho iya kuba nophuculo, kwaye kuya kuba njalo nakwiinjongo zakho zeshishini.
Kwaye, sifuna ukuba ufunde kwinkqubo, kwaye njengeNkulumbuso yeQabane kuGoogle, sinomqolo wakho kwaye siyathembisa ukuba uya kufumana okona kubungcali bethu. Awuyi kufumana igama eliphambili kunye nesixhobo se-SEO, kodwa iqabane kulwaphulo-mthetho, elingazukukunika kuphela amagama aphambili obewufuna, kodwa kunye nezixhobo kunye nolwazi olufunekayo ukuze ube Google Ads ngokwakho. Ishishini lakho liya kuwubona umohluko!
Bonke-in-nye Umhleli elingundoqo
Yenza uphando lwakho lwamagama aphambili ukusuka ekuqaleni ukuya ekugqibeleni Clever Ads ilula ngoluhlobo! Ukusuka ekungeneni kwegama eliphambili okanye i-URL (ukuhlola amagama okhuphiswano okhuphisana nawo ayikokuqhatha! Yenye yeqhinga!) Ukubandakanya iingcebiso zegama eliphambili olikhethileyo kwimikhankaso Google Ads Zonke zisuka kwindawo enye, ngaphandle kokutshintsha izixhobo okanye iipaneli zolawulo. Kwaye simahla! Uyagqiba!
Usebenzisa Clever Ads seClever Ads kunye nezinye izixhobo zethu, onokuzifumana kwiphepha lethu lasekhaya, kuya kwandisa Google Ads kunye nokwandisa ukuzinikela kwakho kunye nohlahlo-lwabiwo mali. Ukuthengisa kwakho kunye neziphumo ziya kuphucuka ngokucacileyo ... Kutheni uphucula amagama akho aphambili xa unokuhlaziya amaphulo onke Google Ads Audit lweeNtengiso zikaGoogle ezenza iintengiso ezintle kunye Google Ads nje olumbalwa? Lawula onke Google Ads ukusuka kwindawo enye kwaye ungabi nakuthintelwa Clever Ads . Phakathi kwezinye izixhobo zethu uya kufumana kuphela zophicotho njengomcwangcisi elingundoqo, kodwa uMdali Campaign, a Banner uMdali yomkhankaso umboniso wakho, zeselula apho ungajonga kwaye ahlaziye yonke metric zenu, kunye nokuhlanganisa ezahlukeneyo izixhobo ezifana Slack , Microsoft Teams okanye Google Chat . Zifumanele zonke kwaye wenze imikhankaso yakho yentengiso zikaGoogle ukuba inganqandeki!
Siza kukucela ukuba ungene kwiakhawunti yakho Google Ads ukwenza uluhlu lwamagama aphambili, ngale ndlela uyakuhlala unegazi ukubuya kwaye ulawule uluhlu lwakho lwamagama aphambili. Sithatha ubumfihlo bedatha ngokungathí sina kwaye siqokelela kuphela oko sikufunayo ukuze sikunike elona thuba lihle linokwenzeka.